Donak'afo : Tapi-maso
Depioten’ny fanovana Nitory ny praiminisitra sy zanaky ny filoha
Nanamarika ny andron’ny tolona teny amin’ny Kianjan’ny 13 mey omaly ny fametrahana fitoriana ny praiminisitra Solonandrasana Olivier momba ny kolikoly avo lenta sy Mathieu Rakotoarimanana, zanaky ny filoha noho ny resaka afera tsy mazava maro.
Ra mandriaka tamin’ny 21 aprily Mahatoky ny fiarovan-tenako aho, hoy Rajao
Miparitaka any anaty tranonkala sy ny tambajotran-tserasera ny resaka nifanaovan-dRajaonarimampianina sy ny mpanao gazety Frantsay iray Pascal Rostain avy amin’ny Paris Match teny Iavoloha ny 19 mey momba ny toe-draharaham-pirenena,
Andry Rajoelina Mbola tena mafy fo amin-dRajao…
Mijanona ho resaka an-jorony aloha ny asa fanelanelanana eo anatrehan’ny krizy politika eto amin’ny firenena.
Seraseran’ny HVM Manaratsy mafy ny vondrona Mapar
Na onjam-peo na fahitalavitra na gazety an-tsoratra sy izay tambajotra sosialy rehetra hita ho manana fironana miaro ny fitondrana HVM dia samy ahatsapana avokoa fa manenjika fatratra ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina sy ny ekipany.
Malagasy Manarina Firenena « Andao hofaranana ny krizy ! »
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy ny alarobia 23 mey tetsy amin’ny hotely Saint Pierre Analakely ny fitsanganan’ny vovonana politika vaovao Malagasy Manarina Firenena (MMF).
Famahana krizy politika Mila dinika avo lenta
Raha nandahatra ny filana fototry ny zanak’olombelona ilay manampahaizana amerikanina, Abraham Maslow, dia notanisainy tao ny filana fitafiana sy sakafo ary fonenana.
Fanamarinana ny anarana anaty lisi-pifidianana Mavitrika ny olona amin’ny ankapobeny
Efa naverin’ny komitim-pirenena misahana ny fifidianana ( CENI) eny anivon’ny fokontany tsirairay avy indray amin’izao fotoana ny lisi-pifidianana hahafahan’ireo mponina tsy voasoratra anarana mampiditra ny anarany.
Rehefa dinihana ny zava-mitranga rehetra dia hita mazava be fa efa nanao kajy politika sy nivonona ny ho kandida i Andry Rajoelina, ary efa tany amin�ny 2010 tany ho any mihitsy, mialoha ny nandaniana ilay lal�mpanorenana no efa nanoman-tena ny lehilahy.
Izay no antony nampihenana ho 35 ny fetran-taonan’izay ho kandida. Nanomboka tamin’ny 2010 ihany koa ny fampanantenana isan-karazany fa hanamboatra fotodrafitrasa ny fitondrana tetezamita, dia izao iaraha-mahita izao fa 5 volana mialoha ny fifidianana dia raikitra amin’izay ny fitokanana mitety faritra. Toa efa nokajiana apetraka any amin’ireo Faritra sy Kaominina be mponina, izany hoe be mpifidy ny fananganana ireo fotodrafitrasa, ary amin’ny maha renivohitra azy, dia tahaka ny niangarana kely mihitsy Antananarivo satria nahazo hopitaly manara-penitra, kianja manara-penitra ho an’ny baolina lavalava, Coliséum na kianja goavambe filanonana, talohan’io dia efa namboarina ny Lapan’ny tanàna vaovao, havaozina tanteraka ny tohatohabaton’Antaninarenina sy Ambondrona ka i Andry Rajoelina manokana no nanome ny vola, ataon’ny Colas maimaimpoana ny asa
. Aorian’io dia ho avy indray ny fanamboarana ilay lalambe migodana mampitohy ny renivohitra amin’Ivato. Hazakazaka arahin-tosika ny an’ny filohan’ny tetezamita amin’ity janoary sy febroary ity, entina hampisehoana fa mahavita azy izy ary afaka tsara manohy ny lalana. Tena lasa tompondaka amin’ny fanapena-maso i Andry Rajoelina ary mampiasa serasera matanjaka hambaboana ny fon’ny vahoaka sy hamelezana ireo mety ho mpifanandrina aminy. Propagandy tsy misy ohatr’izany intsony e !